Isikhokelo sabazali baka MAHHALA kwi-Intanethi ye-Intanethi ye-ponografi-Ukuhlaziywa kwesifo-Umvuzo
Ikhaya Iibhulogi zeendaba Isikhokelo sabazali saSimahla kwi-Intanethi ye-Intanethi ye-ponografi-Ukuhlaziywa kwesifo
lawula888 18hi ngoFebruwari 2021 Education, impilo, Iindaba zamva
I-Autism Spectrum Disways
Iividiyo ezimfutshane zokukhusela abantwana
Ncedisa kwezo zincoko zinzima
Iingcebiso eziphambili zokuthetha nabantwana
Iingcebiso eziphezulu malunga nee-smartphones
Misela kwakhona ubuchopho bomntwana wakho
Iincwadi zaBantwana abancinci
Izibonelelo zasimahla kwi-Intanethi zabazali
Ukuvuselelwa kwewebhu yabasebenzisi abancinci
Izixhobo zokubuyisa ezisekwe kwinkolo
Inkxaso engakumbi evela kwi-Foundation Reward Foundation
Ngaphambi kokuba siqale kolu hlolo malunga nemingcipheko ye-porn, masikhumbule ukuba kutheni kubalulekile. Sifuna abantwana bakhule babe nolwalamano olonwabileyo, olunothando nolukhuselekileyo. Bukela oku ividiyo enomtsalane, "Yintoni uthando?" ukusikhumbuza ukuba ijongeka kanjani xa usenza
Njengabazali kunye nabanonopheli babantwana yeyona mizekelo ibalulekileyo kunye nomthombo wesikhokelo kubantwana bakho. Kude kube kubudala be-18, ubuncinci, unoxanduva lokuphila kakuhle. Esi sikhokelo sabazali kwimifanekiso engamanyala kwi-intanethi siyakukunceda uzithembe ngokwaneleyo ukuze ube nezo ngxoxo zinzima. Funda malunga nefuthe lezempilo ye-porn, ifuthe lomzimba, kunye neziphumo ezibonisa amanyala. Olu lwazi luya kukuvumela ukuba ukhusele abantwana bakho kuluhlu lwezinto ezibi eziye zachongwa ziingcali zezempilo kunye namawaka wabasebenzisi bangaphambili. Sifaka icandelo lokuthumela imiyalezo ngefowuni kunye nefuthe elisemthethweni kuwe nakumntwana wakho.
Ngexesha lobhubhane, isithukuthezi siza kuvumela abantwana abangakumbi ngengozi okanye uyilo, ukuba bahlangane nonikezelo olungenasiphelo lwe-hardcore pornography. Ngaphandle kokuba uzifundise, emva koko nabantwana bakho, malunga neziphumo ezinokubakho kwimpilo yengqondo neyomzimba, kukho imingcipheko yomntwana wakho ekuphuhliseni iingxaki ezinxulumene ne-porn kwixa elizayo. Uxolo ukungabi nayo, kodwa oku kukujonga okwenyani. Ulutsha lolona lusemngciphekweni omkhulu wokukhula kwengxaki zempilo yengqondo kunye neziyobisi ngokuhamba kwexesha. Nantsi into elungileyo vidiyo ngugqirha wengqondo okhathazekileyo othetha ngokujamelana nobhubhane.
Uphando oluvela kwiBhodi yaseBritane yokwaHanjiswa kweFilimu
Ngokwalo uphando ukusuka kwi-2019, abantwana abancinci njenge-7 kunye ne-8 bayakhubeka kwimifanekiso engamanyala. Kwakukho abazali abangama-2,344 nabantu abancinci abathathe inxaxheba kolu phando.
Uninzi lwabantu abancinci okokuqala ukubukela iphonografi ngengozi, ngaphezulu kwe-60% yabantwana i-11-13 ababone iphonografi besithi ukubukela kwabo iphonografi akunanjongo.
Abantwana bachaze ukuba baziva "bephelelwe lixesha" kwaye "bedidekile", ngakumbi abo babone iphonografi xa babephantsi kweminyaka eyi-10.
Ngaphezulu kwesiqingatha (i-51%) yabantwana abaneminyaka eli-11 ukuya kweli-13 ubudala baxela ukuba babonile iphonografi ngaxa lithile, bonyukela kwi-66% ye-14-15 yeminyaka ubudala.
I-83% yabazali ivumile ukuba ulawulo lokuqinisekisa ubudala kufuneka lubekhona kwimifanekiso engamanyala kwi-Intanethi
Ingxelo ikwabonakalise ukungangqinelani phakathi kweembono zabazali kunye nezinto ezazisenzeka ebantwaneni. Iikota ezintathu (75%) zabazali zivakalelwa kukuba umntwana wabo ngekhe abone iphonografi kwi-intanethi. Kodwa kubantwana babo, ngaphezulu kwesiqingatha (53%) bathe babonile.
UDavid Austin, iGosa eliyiNtloko le-BBFC, uthe: Umzimba kunye nemvume. Olu phando lukwabonisa ukuba xa abantwana abancinci - kwezinye iimeko beseneminyaka esixhenxe okanye esibhozo ubudala - beqala ukubona iphonografi kwi-Intanethi, oku akuqhelekanga. ”
Uninzi lwabantwana kunye nabazali ekwenziwe udliwanondlebe nabo bakholelwa ekubeni ukungqinisisa iminyaka yobudala kuya kuthintela abantwana ekuboneni ngempazamo iphonografi besebancinci, kwaye banokulibazisa ubudala babo.
I-83% yabazali ekuhlolisiswe kubo yavuma ukuba kufanele ukuba kubekho ulawulo lokuqinisekisa iminyaka yobudala kwi-intanethi ye-intanethi. Olu phando lukwabonise ukuba abantu abancinci bafuna ukuqinisekiswa kweminyaka-i-47% yabantwana baziva ingqinisiso lobudala yayiluluvo olulungileyo, abaneminyaka eli-11 ukuya kweli-13 ubudala bethanda kakhulu kunolutsha.
Umkhwa wokujonga iphonografi unokubangela iziphumo ebezingalindelekanga zilandelayo:
ndiziva ndicaphukile xa ndingakwazi ukufikelela kwi-porn
Olu luhlu lungasentla luhlengahlengiswe kwincwadi "I-Trap Trap”NguWendy Malz. Ngelixa uninzi lwezi zinxulumene nolutsha oludala kunye nabantu abadala abancinci, ezinye zinamava abantwana nazo.
Malunga nokufikisa, abantwana baqala ukuba nomdla ngakumbi ngesondo kwaye bafuna ukufunda kangangoko. Ngoba? Kungenxa yokuba eyona nto iphambili kwindalo kukuvelisa ngokwesondo, ukugqithisa kwimfuza. Kwaye siyilwe ukuba sigxile kuyo, silungile okanye akunjalo. I-intanethi yindawo yokuqala abantwana abaqala ukukhangela iimpendulo.
Ukufikelela simahla, ukusasazwa, iphonografi yeentengiso zesondo yenye yezona zilingo zikhulu, ezingalawulelwanga kwezentlalo ezakha zafunyanwa embalini. Yongeza uluhlu olutsha lonke lweendlela zokuziphatha eziyingozi kwingqondo esele ifuna ingozi. Bona le vidiyo imfutshane ukuze uqonde ngakumbi malunga ingqondo yobutsha ngengcebiso yabazali evela kwingcali ye-neurosologist.
Abafana bathanda ukusebenzisa iisayithi ze-porn ngakumbi kunamantombazana, kwaye amantombazana akhetha indawo zentlalo yoluntu kwaye anomdla ngakumbi kumabali angama-erotic, anjenge-50 Shades of Grey. Lo mngcipheko owahlukileyo kumantombazana. Umzekelo, sivile malunga nentombazana eneminyaka eli-9 ubudala eyayikhutshileyo kwaye yafunda ingxelo engamanyala kwi-Kindle yayo. Oku kwenzeka ngaphandle kokuba umama wakhe wafaka izithintelo kunye nolawulo kuzo zonke ezinye izixhobo angena kuzo, kodwa engabinalo uhlobo.
Ulutsha oluninzi luthi banqwenela ukuba abazali babo bangasebenza ngakumbi ekuxoxeni nabo ngemifanekiso engamanyala. Ukuba abanakukucela uncedo, bazokuya phi?
Eyona ndawo yewebhu ikhulu neyaziwa kakhulu I-Pornhub ikhuthaza iividiyo ezivelisa unxunguphalo ezinjengokubulala iphonografi, ukukrexeza, ukungcungcutheka, ukudlwengula kunye neqela lemigulukudu. Isinqe yenye yezona ntlobo zikhula ngokukhawuleza ngokutsho I-PornhubIingxelo ezizezakho. Uninzi lwayo lusimahla kwaye lufikeleleka lula. I-Pornhub ibona ubhubhane njengethuba elihle lokuxhoma abasebenzisi abaninzi kwaye banikezela ukufikelela simahla kwiziza zabo zepremiyamu (zihlala zihlawulwa) kuwo onke amazwe.
Ukuba unomntwana oye wavavanywa njengakwisimo sengqondo se-autism, kuya kufuneka wazi ukuba umntwana wakho unokuba semngciphekweni omkhulu wokubambeka kwimifanekiso engamanyala kunakwabantwana abane-neurotypical. Ukuba ukrokrela ukuba umntwana wakho angabonakala kumboniso, ingangumbono olungileyo ukuba nabo vavanywa ukuba kuyenzeka. Amadoda aselula ngokukodwa ane-ASD okanye iimfuno zemfundo ezizodwa amelwe ngokungachanekanga kwiinkcukacha-manani zokona ngokwesondo. Ichaphazela okungenani Abantu abayi-1-2% Inani labemi ngokubanzi, ayaziwa, ukubakho kwayo kwaye ayaziwa Iipesenti ezingama-30 zaboni bakwi-spectrum okanye banobunzima bokufunda. Nantsi iphepha elitsha malunga namava omnye umfana. Nxibelelana nathi ukufikelela kwiphepha ukuba kuyafuneka.
Ukuphazamiseka kwembonakalo ye-Autism yimeko ye-neurological ekhoyo kwasekuzalweni. Ayisiyo ngxaki yempilo yengqondo. Ngelixa yimeko exhaphake kakhulu phakathi kwamadoda, 5: 1, abantu basetyhini banayo nayo. Ngolwazi oluthe kratya funda ezi bhlog i-porn kunye ne-autism; ibali likamama; yaye autism: yangempela okanye inkohliso?
Lo mzuzu we-2, uqaqambile oopopayi ibonelela ngesishwankathelo esikhawulezayo kwaye ixhasa imfuno engxamisekileyo yokuphunyezwa komthetho wokuqinisekisa iminyaka ukukhusela abantwana. Ungayibonisa abantwana bakho nayo njengoko ingenayo imifanekiso engamanyala. Ungabhalela neLungu lePalamente yakho naphina apho ukhoyo kwaye unyanzele urhulumente ukuba aphumeze umthetho wokuyila umthetho wokuqinisekisa ubudala ukukhusela abantwana bakho kwi-intanethi.
Le 5-umzuzu yokuzonwabisa sisicatshulwa esivela kuxwebhu oluvela eNew Zealand. Kuyo ugqirha wemithambo-luvo ucacisa ukuba injani na imo yobukrelekrele kujongeka njengengqondo kwaye ubonise ukuba kufana kangakanani nokubakho kumkhwa wecocaine.
Kule ntetho yeTEDx "Isini, amanyala kunye nobudoda", UNjingalwazi uWarren Binford, ethetha njengomama notitshala ochaphazelekayo, unika umbono ocacileyo wokuba iphonografi ibachaphazela njani abantwana. Le ntetho yeTEDx nguNjingalwazi Gail Dines “Ukukhula kwinkcubeko engamanyala”(Imizuzu eli-13) icacisa gca ukuba iividiyo zomculo, iisayithi ezingamanyala kunye namajelo eendaba ezentlalo zibumba njani ubundlobongela babantwana bethu namhlanje.
Nantsi intetho ehlekisayo yeTEDx (imizuzu eyi-16) ebizwa ngokuba "Njani Iimvakalelo Ezithandwayo Zithandana Ngokwezesondo”Ngumama waseMelika kunye nomhlohli wesini UCindy Pierce. Isikhokelo sabazali bakhe sithi kutheni izingxoxo eziqhubekayo nabantwana bakho malunga ne-porn ziyimfuneko kwaye yintoni enomdla wabo. Jonga apha ngezantsi ngezixhobo ezininzi malunga nendlela yokwenza ezo ncoko.
Abantwana abancinci njengabathandathu bafumana imifanekiso yamanyala. Abanye abantwana banomdla kwaye bafuna kakhulu, abanye bayenzakala kwaye banobusuku obumnandi. Izixhobo ezilukhuni zabantu abadala azilungelanga abantwana bayo nayiphi na iminyaka ngenxa yenqanaba lokukhula kwengqondo. Nantsi umbiko yahlaziywa ngo-2017 ibizwa ngokuba “… bendingazi ukuba yinto eqhelekileyo ukubukela…” uvavanyo olusemgangathweni noluninzi lwempembelelo yamanyala kwi-intanethi kwiinqobo ezisemgangathweni, izimo zengqondo, iinkolelo kunye nokuziphatha kwabantwana nolutsha. ” Yayithunywe kwiYunivesithi yaseMiddlesex yi-NSPCC kunye noMkomishinala waBantwana waseNgilani naseWales.
Yazi ukuba kunzima kangakanani ukuzilawula kulutsha. Le yeyona ntetho ibalaseleyo yeTEDx ebizwa Ubushushu beXeshana: Iziphumo zokuVuswa kwesondo ekuthatheni izigqibo ngokwesondo.
Sicebisa ngokupheleleyo ukuba ubukele le vidiyo intsha. Unga jonga i-trailer yasimahla kwiVimeo. Luxwebhu olwenziwe ngabazali, abathi baba ngabenzi beefilimu, ngabazali. Olona luvo luphambili lomba esilubonileyo kwaye inemizekelo emihle yendlela yokuba neengxoxo ezinobuqili nabantwana bakho.
Ukujonga isiseko sevidiyo kubiza kuphela i- $ 4.99 kwaye yeyona mali ichithwe ngeyona ndlela unokuyithemba. (Asifumani mali ngale ngcebiso.) Uninzi lweengcali kunye nezixhobo esizicebisayo kwesi sikhokelo sabazali ziyavela kuxwebhu. URob noZareen babeka yonke imali kunye nobuchule ekwenzeni oku njengenkonzo kwabanye abazali, ke nceda uyithenge ukuba unako. Enkosi. Ukuba awufuni kuchitha nayiphi na imali, zikhona ezinye iividiyo ezigqwesileyo ezingezantsi ezifumaneka simahla.
“Ungasoli kwaye ube neentloni” umntwana ngokubukela iphonografi. Kuyo yonke indawo ekwi-Intanethi, kuvela amajelo osasazo kwanevidiyo yomculo. Kunokuba nzima ukukuphepha. Abanye abantwana bayayidlulisa ngenxa yohleko okanye iBravado, okanye umntwana wakho angakhubeka kuyo. Basenokuba ngokuqinisekileyo bayifuna ngamandla. Ukuthintela umntwana wakho ukuba angayiboni kuphela kuyenza ukuba ihende ngakumbi, kuba njengoko eli lidala lisitsho, 'isiqhamo esinqatshelwe sisithandwa kakhulu'
Gcina imigca uqhagamshelwano oluvulekileyo ukwenzela ukuba uyisango lokuqala lokufowunela ukuxoxisana ngemiba ecaleni lezonxeba. Abantwana ngokwemvelo bafuna ukwazi ngesondo ukususela kumncinane. I-porn e-intanethi ibonakala njengendlela epholileyo yokufunda indlela yokuziphatha kakuhle ngesondo. Vula kwaye uthembeke ngeemvakalelo zakho malunga nezoconsonografi. Khawucinge ngokuthetha ngokubhenela koononophala njengomntu omncinci, nangona uvakalelwa.
Abantwana abayidingi intetho enye enkulu malunga nezesondo. Bona zidinga iingxoxo ezininzi ekuhambeni kwexesha njengoko behamba kwiminyaka yeshumi elivisayo. Umntu ngamnye kufuneka abe neminyaka efanelekileyo, cela uncedo ukuba uyayifuna. Ootata noomama Zombini kufuneka zidlale indima ekuzifundiseni ngokwazo kunye nabantwana bazo malunga nefuthe lobugcisa banamhlanje.
Ukujongana nemibhikisho: Abantwana banokuqhankqalaza ekuqaleni, kodwa abantwana abaninzi basixelele ukuba bangathanda ukuba abazali babo babanyanzelise ixesha lokubuyela ekhaya kwaye babanike imida ecacileyo. Awumenzeli umntwana wakho naziphi na izinto ezilungileyo ngokushiya 'ngokoqobo' kwizixhobo zabo.
Sukuziva unetyala ngenxa yokuthatha isenzo esithintekayo nabantwana bakho. Impilo yabo yengqondo kunye nokuphila zikhulu kakhulu ezandleni zenu. Zibophe ngolwazi kunye nentliziyo evulekileyo yokunceda umntwana wakho ahambe kule nkqubo enzima yophuhliso. Nantsi cebiso evela kumntwana wengqondo.
yakutshanje uphando icebisa ukuba amacebo okucoca wedwa akanakubakhusela abantwana bakho ekufikeleleni kwi-intanethi. Esi sikhokelo sabazali sigxininisa isidingo sokugcina iindlela zonxibelelwano zivulekile njengezona zibaluleke ngakumbi. Ukwenza i-porn kube nzima ukufikelela kuyo kodwa ihlala sisiqalo esihle ngakumbi kubantwana abancinci. Kufanelekile ukubeka Iifayile kuzo zonke izixhobo zeintanethi kwaye Khangela kwi qho ngamaxesha ukuba bayasebenza. Jonga kwi-Childline okanye umboneleli wakho we-intanethi malunga neengcebiso zamva nje malunga nokucoca.
Owayesakuba ngunjingalwazi kwezentlalo, umbhali kunye nomama, uGqr Gail Dines, ngumseki weNkcubeko eVuselelwe. Yibone intetho yakhe yeTEDx "Ukukhula kwinkcubeko engamanyala”(13 imiz). Yena neqela lakhe baphuhlise izixhobo ezikhululekileyo nezilungileyo eziza kunceda abazali bakhulise abantwana abakwaziyo ukumelana ne-porn. Ungayenza njani incoko: jonga i INkcubeko inqatshelwe Inkqubo yabazali.
Le yincwadi entsha ebhalwe nguColette Smart, umama, owayesakuba ngutitshala kunye nengcali yezengqondo ebizwa ngokuba “Baza Kulunga". Incwadi inemizekelo eli-15 yeencoko onokuthi ube nazo nabantwana bakho. Lewebhusayithi ikwanodliwanondlebe kunye nomlobi ekwabelana nabanye ngezimvo eziphambili.
Ukulibala ukunika umntwana wakho i-smartphone okanye ithebhulethi ixesha elide kangangoko kunokwenzeka. Iifowuni eziphathwayo zithetha ukuba ungahlala unxibelelana. Ngelixa kunokubonakala ngathi ngumvuzo wokusebenza nzima kwisikolo samabanga aphantsi okanye kumabanga aphantsi ukubonisa umntwana wakho nge-smartphone xa engena kwisikolo samabanga aphakamileyo, jonga into eyenzayo ekuphumeleleni kwabo kwezifundo kwiinyanga ezilandelayo. Ngaba abantwana bayayidinga ukufikelela kwi-24 yeyure ngosuku kwi-intanethi? Ngelixa abantwana banokufumana imisebenzi emininzi yasekhaya ekwi-Intanethi, ngaba ukusetyenziswa kokuzonwabisa kungathintelwa kwimizuzu engama-60 ngosuku, nanjengokulinga? Nazi usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows ukubeka iliso ekusetyenzisweni kweintanethi ngokukodwa ngeenjongo zokuzonwabisa. Abantwana be-2 iminyaka nangaphantsi akufuneki basebenzise izikrini konke konke.
Vala intanethi ebusuku. Okanye, ubuncinci, Susa zonke iifowuni, iitafile kunye nezixhobo zemidlalo kwigumbi lokulala lomntwana wakho. Ukungabikho kokulala okubuyisayo kukonyusa uxinzelelo, uxinzelelo kunye noxinzelelo kubantwana abaninzi namhlanje. Bafuna ukulala ubusuku bonke, iiyure ezisibhozo ubuncinci, ukubanceda badibanise ukufunda kwemini, babancede bakhule, baqonde iimvakalelo zabo kwaye bazive bephilile.
Vumela abantwana bakho bazi ukuba Iphonografi yenzelwe i-dollar yezigidigidi nkampani ukuba "hook" abasebenzisi ngaphandle kokwazi kwabo ukwenza imikhwa ebenza ukuba babuyele ngakumbi. Konke malunga nokugcina ingqalelo yabo. Iinkampani zithengisa kwaye zabelane ngolwazi olusondeleyo malunga neminqweno kunye nemikhwa yomsebenzisi kubantu besithathu nakubathengisi. Yenziwe ukuba ibe likhoboka lomdlalo we-Intanethi, ukugembula kunye nemithombo yeendaba zentlalo ukugcina abasebenzisi bebuya ngakumbi ngokukhawuleza xa bedikiwe okanye bexhalabile.
Zininzi isoftware kunye nenketho zenkxaso. Ikydz Ngaba iapp ivumela abazali ukuba babeke iliso ekusetyenzisweni kwabantwana babo. Igalari Guardian yazisa abazali xa kuvela umfanekiso okrokrisayo kwisixhobo somntwana wabo. Ijongene nemingcipheko ejikeleze ukuthumela imiyalezo ngefowuni.
umzuzu yi app free evumela umntu ukuba abeke iliso ekusebenziseni kwakhe kwi-intanethi, ukuseta umda kunye nokufumana izikhalazo xa efikelela kuloo mida. Abasebenzisi banotyekelo lokujongela phantsi ukusetyenziswa kwabo ngumda obalulekileyo. Le app iyafana kodwa ayikhululekanga. Inceda abantu baqalise iingqondo zabo ngoncedo apha endleleni. Kuyabizwa Brainbuddy.
Nazi ezinye iinkqubo ezinokuba luncedo: Amehlo Omnqophiso; Bark; NetNanny; Ukuthatha inxaxheba; Ulawulo lwabazali eQustodio; WebWatcher; INkulumbuso yaseNorton yoSapho; I-OpenDNS iVIP yasekhaya; I-PureSight Multi. Ukuvela kweenkqubo kolu luhlu akubonisi ukuvunywa yiSiseko soMvuzo. Asifumani sibonelelo semali kwintengiso yeziapps.
Incwadi ebalaseleyo kwintengiso ligosa lethu lophando elibekekileyo uGary Wilson. Singayithetha loo nto, kodwa kuyenzeka kuyinyani. Ibizwa ngokubaUbuchopho Bakho kwi-Porn: Iimifanekiso zoononopasho ze-Intanethi kunye neSayensi eVukayo yoLungiso”. Isikhokelo sabazali esihle. Nika abantwana bakho ukuba bafunde njengoko inamakhulu amabali ngabanye abantu abancinci kunye nemizabalazo yabo yokujonga iphonografi. Uninzi lwaqala ukubukela iphonografi kwi-intanethi besebancinci.
UGary ngutitshala ogqwesileyo wesayensi ochaza umvuzo wobuchopho, okanye inkuthazo, inkqubo ngendlela efikeleleka kakhulu kwabo bengengabo abenzululwazi. Incwadi yihlaziyo kwisithandwa sakhe TEDx intetho evela kwi2012.
Incwadi iyafumaneka kwiphepha elibhaliweyo, ku-Kindle okanye kwincwadi yeaudiyo. Ngapha koko inguqulelo yeaudio iyafumaneka SIMAHLA e-UK Apha, Nabantu base-USA, Apha. Ihlaziyiwe ngo-Okthobha u-2018 ukuze ithathe ingqalelo yokwamkelwa kwecandelo elitsha lokuqonda isifo loMbutho wezeMpilo weHlabathi.Isiphazamiso sokuziphatha okubi ngokwesondo okunyanzelekileyo". Iinguqulelo ziyafumaneka ngesiDatshi, isiArabhu nangesiHungary ukuza kuthi ga ngoku, kunye nabanye abakwipayipi.
Incwadi yengqondo yomntwana uDkt Victoria Dunckley ethi "Yenza kwakhona Ubunzima Bantwana bakho"Kwaye ikhululekile blog Chaza iimpembelelo zexesha elininzi kakhulu lesikrini kwingqondo yomntwana. Ngokubalulekileyo icwangcisa isicwangciso sokuba abazali banokwenza ntoni ukunceda umntwana wabo abuyele emgceni kwakhona.
UGqr Dunckley akahlukanisi nokusetyenziswa kwe-porn kodwa ujolise ekusebenziseni i-intanethi ngokubanzi. Uthi malunga neepesenti ezingama-80 zabantwana azibonayo azinazo iingxaki zempilo yengqondo abaye bafumanisa ukuba banazo kwaye banikwa amayeza, njenge-ADHD, ukuphazamiseka kwengqondo, uxinzelelo, uxinzelelo njl.njl. ' Esi sifo silingisa iimpawu ezininzi zezi ngxaki zempilo yengqondo. Imicimbi yezempilo yengqondo ihlala inyangeka / incitshiswe ngokususa izixhobo ze-elektroniki kangangesithuba seeveki ezi-3 kwimeko ezininzi, abanye abantwana badinga ixesha elide ngaphambi kokuba baqhubeke nokusetyenziswa kodwa kwinqanaba elilinganiselweyo.
Incwadi yakhe ikwachaza indlela abazali abanokukwenza ngayo oku kwisikhokelo samanyathelo ngamanyathelo ngokubambisana nesikolo somntwana ukuqinisekisa intsebenziswano efanelekileyo kumacala amabini.
Ugqirha uPhilip Zimbardo no Nikita Coulombe abaziwayo kwezentlalo bavelise incwadi ebalaseleyo ebizwa Umntu waphazamiseka malunga nokuba kutheni abafana besokola namhlanje kwaye sinokwenza ntoni ngayo. Iyakwandisa kwaye ihlaziye intetho eyaziwayo ye-TED kaZimbardo "Ukutshatyalaliswa kwabafana". Ngokusekwe kuphando olomeleleyo, ichaza ukuba kutheni amadoda evutha umlilo kwaye engaphumeleli ekuhlaleni nakwabelana ngesondo nabasetyhini.
Iincwadi Kwabantwana Abancinane
Ibhokisi lePandora livulekile. Ngoku ndiyenza ntoni? " UGail Poyner unengqondo yeengqondo kwaye unikeza ulwazi oluncedo lobuchopho kunye nokuqeqeshwa okulula ukubanceda abantwana bacinge ngeendlela.
"Imifanekiso emihle, imifanekiso emibi"NguKristen Jensen noGail Poyner. Kwakhona incwadi enhle egxile kwingqondo yengqondo.
Akunabantwana. Ukukhusela abantwana. ULiz Walker ubhale incwadi elula kubantwana abancinci abanemifanekiso emibalabala.
Imfihlo yeHamish kunye noMfihlo. Le yincwadi entsha ebhalwe nguLiz Walker yabantwana abaneminyaka engama-8 ukuya kweli-12.
Funda ngo impilo, kwezomthetho, zemfundo kwaye ulwalamano iimpembelelo zokusebenzisa iphonografi kwi I-Foundation Foundation iwebhusayithi kunye neengcebiso malunga ukuyeka.
Jonga indlela INkcubeko inqatshelwe Inkqubo yabazali kunceda abazali ukuba bajongane notshintsho lwangoku lwenkcubeko kunye nefuthe labo ebantwaneni.
Ukuqonda ukuba kunganzima kangakanani ukwenza umthambo Ukuzibamba. Ukuhlekisa ngevidiyo ngugqirha wezengqondo ophezulu.
Ukuthintela indlela yokuziphatha ngokwesini zixhobo ukusuka kwiLucy Faithfull Foundation.
Isiluleko esilungileyo esiluncedo kwi-charity anti-child's charity Stop It Now! Abazali baKhusele
Lwela isiyobisi esitsha Ungathetha njani nabantwana bakho malunga ne-porn.
Nantsi into ebalulekileyo umbiko ku Imiba ye-Intanethi ukhuseleko lwe-intanethi kunye ne-digital piracy kunye neengcebiso malunga nendlela yokugcina umntwana wakho ukhuselekileyo xa ekhwela umnatha.
Iseluleko evela I-NSPCC malunga ne-intanethi ye-intanethi.
Uninzi lweewebhu ezikhululekile zokubuyisela iinjengewe yourbrainonporn.com; RebootNation.org; PornHelp; NoFap.com; Fightenewdrug.org; Hamba Ubukhulu kwaye Umlutha we-Internet Porn Ngabantu abasebenza ngokwenkolo kodwa nabasebenzisi benkolo. Iluncedo kubazali ukujonga ukufumana uluvo lwento abo baphinde bafumana kwaye ngoku bajongana nayo njengoko belungelelanisa.
Kukho izixhobo ezintle ezifumanekayo nakumaziko asekelwe kwikolo njengaye Ukuthembeka okubuyiswe kumaKatolika, ngamaKristu ngokubanzi Iprojekthi yeNak yeNyaniso (UK) Njani AmaThupha Ahlawulayo (E-US), kunye MuslimMatters abo bokholo lwamaSilamsi. Nceda unxibelelane nathi ukuba kukho ezinye iiprojekthi ezisekela ukholo esinokuthi sizityikitye.
Ukusetyenziswa rhoqo kwe-intanethi ye-intanethi ngabantwana abumba ingqondo yomntwana, itemplate yabo yokuvuselela ngokwesondo. Inefuthe elikhulu ekuthumeleni imiyalezo kunye nokuthumelana nge-intanethi. Inkxalabo yabazali kufanele ukuba ibe nefuthe elinokubakho lomntwana wabo ekuphuhliseni ingxaki yokusebenzisa iphonografi ekhokelela ekuziphatheni okubi ngokwesini kwabanye. Oku iphepha ukusuka kwiQela leNgcali elonyulwe nguRhulumente waseScotland kwiindlela zokuziphatha eziyingozi phakathi kwabantwana linika imizekelo yokuziphatha okunjalo. Jonga apha ukuze ufumane ulwazi oluphambili malunga nokuthumela imiyalezo ngefowuni, ukuziphindezela kwi-porn, njl.njl. Ukuthumela iifoto eScotland. Ukuthumela imiyalezo ngaphakathi INgilane, Wales kunye ne-Northern Ireland.
Jonga isibonelelo esichasayo sokuziphatha kakubi ngokwesondo esichasene nomntwana uLucy Faithfull Foundation zixhobo ejolise kubazali, abanonopheli, amalungu osapho kunye neengcali. ISiseko soMvuzo sikhankanywe njengomthombo woncedo.
E-UK, amapolisa ayacelwa ngumthetho ukuba aqaphele naziphi na izehlo zokuthumela imiyalezo yemifanekiso engathandabuzekiyo kwinkqubo yeMbali yamaPolisa. Ukuba umntwana wakho ubanjwe enemifanekiso engamanyala kwaye ebenyanzelisa ukuyifumana okanye eyidlulisela kwabanye, angabekwa ityala ngamapolisa. Ngenxa yokuba ulwaphulo-mthetho ngokwesondo luthathelwa ingqalelo kakhulu ngamapolisa, loo nto iphosakeleyo, irekhodwe kwinkqubo yezembali yamapolisa, iya kugqithiselwa kulowo uza kuba ngumqeshi xa kucelwa itshekhi ephuculweyo yokusebenza nabantu abasesichengeni. Oku kubandakanya umsebenzi wokuzithandela.
Ukuthumelelana imiyalezo nemifanekiso yamanyala ngefowuni kungabonakala kuyindlela engenabungozi yokudlala ngothando, kodwa ukuba kuyabukrakra okanye kuyanyanzelwa, ifuthe linokuba nefuthe elibi kwithuba elide kumathuba omsebenzi omntwana wakho. Imifanekiso engamanyala rhoqo isebenzisa iimodeli zokunyanzelwa.
Urhulumente wase-UK ukuhlehlisile (ukungarhoxiswa) ukuzibophelela kwakhe ekukhuseleni abantwana kwi-intanethi. Bona oku Ileta evela kubaphathiswa bakarhulumente kuNobhala woMdibaniso waBantwana waBantu malunga noKhuseleko lwe-Intanethi. Injongo yomthetho wokuqinisekisa ubudala (Umthetho wezoQoqosho kwiDijithali, iSigaba 3) yayikukwenza iinkampani zoononografi zentengiso zifake isoftware esebenzayo yokuqinisekisa ubudala ukuthintela ukufikelela kwabo baneminyaka engaphantsi kwe-18 kwiiwebhusayithi zorhwebo. Bona oku blog malunga nayo ngeenkcukacha ezithe kratya. Imigaqo emitsha ifuna ukubandakanya amaziko eendaba ezentlalo kunye newebhusayithi yephonografi yorhwebo phantsi komtsha UMthetho oYilwayo weHarms ekwi-Intanethi kodwa ayilindelanga ukuba ihlale ilungile de ibe yi-2023-24. Iya kuchaza uxanduva lokhathalelo. Khumbula, ungabhalela neLungu lePalamente naphina apho ukhoyo kwaye unyanzelise ukuba urhulumente avelise umthetho wokuqinisekisa ubudala ukukhusela abantwana bakho kwi-intanethi. Kuluxanduva lwabo ukukhusela abona bantu basesichengeni eluntwini.
Nceda uqhagamshelane nathi ukuba kukho nayiphi na indawo ongathanda ukuyifaka kulo mbandela. Siza kuphuhlisa izinto ezininzi kwiwebsite yethu kwiinyanga ezizayo. Bhalisela kwi-newsletter ye-e-newsletter Iindaba ezibuyiselwayo (ngeenyawo zephepha) uze usilandele kwi-Twitter (@brain_love_sex) malunga neentuthuko zakutsha nje.
Isikhokelo sabazali sagqityelwa ukuhlaziywa nge-18 kaFebruwari 2021